Faah Faahin Dheeraad Ah Oo Ka Soo Baxeysa Dagaal Dhexmaray Ciidamada Maamulada Soomaaliland iyo Khaatumo – idalenews.com
Faah faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal gobolka Sool ku dhex maray Ciidamo kala taabacsan Maamullada Soomaaliland iyo Khaatumo.
Xaaladda Duleedka Bari ee magaalada Laascaanood ayaa xalay ahayd mid degan kadib markii shalay aroortii uu dagaal xoogan ku dhax maray ciidamo kala taabacsan maamulka Soomaaliland iyo maamul goboleedka Khaatumo Sida ay Radio Muqdisho u xaqiijiyeen dadka deegaanka Laascaanood Dagaalka ayaa billowdey kadib markii ciidamo ka tirsan Khaatumo ay soo weerareen fariisin ay ciidamada Soomaaliland ku lahaayeen duleedka Bari ee magaalada Laascaanood gaar ahaan halka loo yaqaan Buurta Sayid Cabdalla Xasan oo ilaa 5 KM u jirta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Dagaalkaas oo socday muddo saacado ah ayaa ilaa iyo hadda si rasmi ah loo shaacin qasaaraha ka dhashay, lakin warar ka madax banaan 2da dhinac ayaa Radio Muqdisho u sheegey in ku dhawaad 10 askari oo isugu jira 2da dhica ay ku dhinteen dagaalkas. halka ay jiraan dhaawacyo ku dhaw labaatameeyo. Warbaahinra madaxa bannaan oo gobolka Sool ka hawlgasha ayaa iyaguna soo daabacay warar sheegaya in qasaaruha dhimashadu uu intaas ka badanyahay oo ilaa 20 askari ay uga dhinteen dagaalkaas ciidamadii Soomaaliland ee weerarka lagusoo qaaday.
Mas’uuliyiinta maamulada Somaliland iyo Khaatumo weli kama aanay hadlin iska hor imaadka balse waxaa jira xiisado todobaadyadii ugu dambeeyey ka taagnaa deegaano ka tirsan gobolka Sool, kuwaas oo u dhaxeeyay ciidamo kala taabacsan Soomaaliland iyo maamul goboleedka khaatumo State of Soomaaliya oo labadaba ay ciidamo ka joogaan gobolka Sool.